के हजुरलाई सुशी मन पर्छ ? | Japan Info - नेपाली
Japan Info > Japan Info - नेपाली > FOOD > के हजुरलाई सुशी मन पर्छ ?
यो लेख सुशी मनपराउने हरिको लागि हो। सुशी जापानको अथेन्तिक खाना हो। यो जापानी डेलिकेसी हो। जापान आउने पर्यटकहरु सबैले जापानको सुशी खान चाहन्छन। सुशी जापानमा मात्र नभई विश्व भरि नै प्रशिद्ध छ। तर पनि धेरै मानिसलाई सुशीमा प्रयोग गरिएको माछाको ’boutमा जानकारी नहुन सक्छ। आज हामि हजुरहरुलाई जापानको कम्बिनी देखि रेस्टुराण्टहरुमा पाइने केहि सुशीहरुको जानकारी गराउने छु।
A post shared by Snap n' Taste (@snapntaste) on Jun 4, 2019 at 6:45am PDT
सुरुमा साल्मोनलाई सुशीको टपिङ्गको रुपमा प्रयोग गरिदैन थियो। साल्मोनलाई काचो खानु हुन्न भन्ने मान्यता थियो। तर अहिले हेर्ने हो भने साल्मोन बेसिक सुशी हो। यो सबै जसो सुशी सेटमा हुने गर्दछ। यसलाई पहिलो चोटि सुशी खानेहरुले पनि निकै रुचाउछन। त्यसको कारण यसमा काचो माछा को गन्ध नआउने भएर हो। यसको तेक्स्चर निकै माईल्ड उने गर्दछ। तोरो साल्मोन चाही अलि बोसो भएको माछाको पेटको कट हो। यो फ्लेभरमा निकै सफ्ट र जुसी हुने गर्दछ।
A post shared by 「日本一鮨を食べてる男」 (@gyogyogyo09) on May 22, 2019 at 5:58am PDT
मागुरो भनेको टुना हो। सुशीमा प्रयोग गरिने मागुरो खस गरि ब्लु फिन टुना हो। यो निकै ठूलो खालको माछा हो। सामान्यतया मागुरो सुशीमा आकामी कट ( पातलो र मिटी फ्लेभर ) प्रयोग हुन्छ। त्यसैगरि च्यु-तोरो कटमा मागुरोको पछाडी पेट तिरको मासु हुन्छ। यसमा बोसोको मात्रा बढी हुनाले निकै नरम र मिठो उने गर्दछ। ओ-तोरो कटमा मागुरोको अगाढी पट्टिको पेटको मासु हुन्छ। यो अरु कटभन्दा निकै महँगो उने गर्दछ। यो मासु निकै डेलिकेट हुन्छ। यसलाई कहिले कहिँ हल्का पोलेर पनि टपिङ्ग गरेर खाने गरिन्छ।
A post shared by Sushi Teh (@sushi.teh) on Jan 27, 2019 at 10:59pm PST
यो हर्स म्याक्रेल हो। यो पनि निकै पपुलर सुशी टपिङ्ग हो। म्याक्रेल माछाहरुमा निकै गाढा गन्ध हुने भएता पनि आजी माछा भने निकै माईल्ड हुने गर्दछ। यो अदुवा र हरियो प्याज टपिङ्ग गरेर पनि खाईन्छ।
A post shared by Salva Cayuela (@salva_cayuela) on May 24, 2019 at 11:59am PDT
साबा भनेको म्याक्रेल माछा हो। यो जापानमा सस्तो खालको धेरै पाईने माछा हो। साबा माछा चाडो बिग्रिने हुनाले यसलाई भिनेगरमा प्रिजर्ब गरेर राखिन्छ। यसो गर्नाले साबामा माछाको गन्ध रही रहन्छ। सुरु चोटी सुशी खानेहरुले साबामा फिसी स्मेल हुने हुनाले मन नपराउन सकछन्।
A post shared by Hal Matsuoka (@matsuokahal) on Apr 3, 2019 at 6:55am PDT
इवाशी भनेको सार्डिन माछा हो। इवाशी सुशी हल्का गुलियो र ओईली फ्लेभरको हुन्छ। यी सुशीहरु थोरै अदुवा र हरियो प्याज राखेर खाइन्छ।
A post shared by Omakase in NYC 🍣 (@omakase_nyc) on Dec 8, 2016 at 8:42am PST
सानमालाई अंग्रेजीमा पेसिफिक सौरी भनिन्छ। यो सानो र्टार लामो आकारको माछा हो। यो धेरै जसो अटम ऋतुमा पाइन्छ। यो माछा सिडी काचो टपिंग वा हल्का ग्रिलगरेर टपिङ्ग गरि खाइन्छ।
A post shared by The Meat Fruit Guy 🍊 (@wat_jonathan) on Jan 9, 2018 at 7:49am PST
यो स्पेनिश म्याक्रेल हो। यसलाई सबै भन्दा उच्च श्रेणीको म्याक्रेल मानिन्छ। यो हल्का पिङ्क रंगमा हुन्छ। यसको पनि साल्मोन जस्तै निकै माईल्ड स्वाद हुन्छ।
८. काम्पाची र बुरी
A post shared by hanare (@hanare_kl) on Sep 12, 2016 at 6:10am PDT
यी दुवै एउटै माछा हुन्। अंग्रेजीमा यसलाई एल्लोटेल भनिन्छ। एल्लोटेलको एडल्टलाई बुरी भनिन्छ भने बुढो भएपछि काम्पाची भनिन्छ। यी दुवै थरिका टपिङ्गलाइ लक्जरी सुशी पनि भनिन्छ। यसको फ्लेभर डेन्स र क्रिमि हुने गर्दछ।
A post shared by 🇵🇭🇺🇸 Pics are my own 🍴🍛🍔🌮🍜🍱🍰 (@bobcebu) on Sep 12, 2015 at 9:49pm PDT
यो सी ब्रिम माछा हो। यो माछाको सुशी हेर्ने बितिकै चिनिन्छ। यो झन्डै झन्डै सेतो र पिङ्क रंगको हुन्छ। यो माछामा कम बोसो हुने र धेरै भिटामिन बि हुने भएकोले यसको सुशिलाई स्वस्थकर मानिन्छ।
अन्य सुशीको टपिङ्गहरुमा अक्टोपस, स्क्विड, स्क्यालोप(होताते), सी अर्चिन(उनि), उनागी(ईल), प्रवन(एबी), तामागो याकी(अण्डा) पनि पर्दछन। सुशी जापानको निकै लोकप्रिय परिकार हो। यहाँ हरेक गल्लीमा एउटा न एउटा सुशी पसल हुने गर्दछ। जापानको यो निकै मिठो खाना पक्कै खानुहोला।